Ukuzimanya nobom’obusulungekileyo base Ikuno-chou The Best of Hyogo ～ひょうごの魅力「再」発見ツアー～ The Best of ひょうご　〜ひょうごの魅力「再」発見ツアー〜
Zizipho Macanda's visit to TAJIMA
eMzantsi Afrika (South Africa)
2017/10/29 – 2017/10/30
Ikuno-chou, Asago City
"Ukuzimanya nobom’obusulungekileyo base Ikuno-chou"
Kudlule unyaka ndihlala eKobe kodwa kange ndide ndilifumane ithuba lokutyelela iiLali zaseJapan. Ndizive ndichulumancile emveni kokuba ndiye ndaphiwa ithuba yiHyogo International Association lokundwendwela enye yeeLali ekuthiwa yi-Ikuno-chou. Ndibulela wonke umntu elenze lwa myoli olu hambo.
Ngomhla we 29 kwinyanga yeDwarha utyelelo lwethu lokuqala beluse Mikobata senkosho, apho kwakuso mbiwa imigodi yeSilivere. Lendawo ihonjiswe ngentshiyekela zomgodi omdala neshishini elikhulu leSilivere. Ngokutsho kophando, elilifa lemveli lunogalelo olukhulu ekuphuhliseni nokuphucula iJapan ngeminyaka yee1900.
Sihambe siyakutya isidlo sasemini eFresh Asago apho sitye ibhokisi eneSushi namanye amaqebengwana. Ngexesha sisitya ndincokole ndafunda lukhulu ngezinye iintlanga zase Jamacia, eMelika, eVietnam, naseSenegal. Emveni siqgibe kutya, ndiye ndazithengela into yozikhumbuza evenkileni yesipho.
Emveni kwesidlo sasemini siye satyelela indawo yembali iIkuno Silver Mine apho singene ngaphakathi komgodi awasetyenziwa ngexesha elidlulileyo. Apha ndifunde lukhulu ngembali yeGinzan miners ekuthiwa ziGinzan Boys. Ndiye ndaziva ndibalulekile emveni kokuba ndamkelwe ngusoDolophu wase Asago City.
Emveni kokuba siqgibe eIkuno Silver Mine, siye sahamba sajikeleza kwiDolophu encinci ekuthiwa yiKuchiganaya Town. Lena yiDolophu ezoleleyo kwaye esagcine amasiko nezithethe zaseJapan. Ndiye ndonwatyiswa kukubona amahlathi ahlaza namanzi enkcenkceza esihla ngomlambo. Ngaphezu koko, ndifunde lukhulu ngezindlu zakudala zaseJapan.
Emveni kwemini ende sikhenketha indawo ezaziwayo eAsago, siye saphelela eKoshataku apho kwazalelwa khona umdlali owaziwayo kumabona kude uShimura Takashi . Sandule sisingisela eAsada Mansion apho sifumane isidlo sangokuhlwa sancokola sonwabile. Ndiye ndaziva ndichulumancile kukwamkelwa ngobubele obukhulu nokunzelwa ukutya okumnandi.
Ngomhla we 30 kwinyanga yeDwarha siye saxoxa singamaqela ababini nesikolo iIkuno High School ngendela esinophuhlisa ngayo utyelelo nokhenketho lwendwendwe ezisuka kwamanye amazwe. Apha ndifunde lukhulu ngokuthetha ngesiJapan kwaye ibiyeyona nto ebendonwabele ubukuyenza.
Ngolunye ulwazi, nqakraza iqhosha elingezantsi: